पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुमाथि यसरी खनिए प्रधानमन्त्री ओली - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुमाथि यसरी खनिए प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्व प्रधानन्यायाधीशरुविरुद्द खनिएका छन् ।
संसद विघटनविरुद्धको मुद्धा सर्वोच्चमा विचाराधिन भएको अवस्थामा पूर्व प्रधानन्याधीशहरुले सर्वोच्चको फैसललाई नै प्रभावित गर्नेगरी विरोध गरेको भन्दै उनले आपत्ती जनाएका हुन् ।
केहीदिन अघि संसद विघटन असंवैधानीक रहेको भन्दै ५ पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले संयुक्त रुपमा वक्तव्य जारी गरेका थिए ।
“केही वर्ष न्यायालयमा जागिर खाने बित्तिकै अहिले पनि आफै न्यायालयमा छु भनेजसो गरेर केही पूर्व न्यायमूर्तिहरु, कस्तो न्याय दिनु भएछ उहाँहरुले आफ्नो पालामा भन्ने मलाई अचम्म लाग्छ, कस्तो न्याय दिनुभयो होला ? सडकमा ओर्लिएर न्यायालयलाई, स्वतन्त्र न्यायालयलाई उहाँहरु लल्कारी रहनुभएको छ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिक समाज र बुद्धिजिवी भनिनेहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर राजनीतिक पक्षधरताका आधारमा आफ्नो हैसियत दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए । साथै सर्वोच्चमा विचाराधिन मुद्दामा अधिवक्तहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई दबाव दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आपत्ती जनाए ।
“यस्तो हुन्छ ? यस्तो हुँदैन ? के पत्रकार सम्मेलन गर्नेहरुले मात्रै कानून पढ्या छ ? अरुले पढ्या छैन ? राजनीतिक पक्षधरताका हिसाबले काम गर्नुभएको छ । नागरिक समाज भनिने, बुद्धिजीवि भनिने अनि पक्षधरतका साथ आफ्नो हैसियतको दुरुपयोग गरे ।” उनले भने ।
आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अस्थिरता रोक्नका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जान लागेको समेत बताए । उनले भने, “अस्थिरता रोक्न प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो, त्यसलाई रोक्न ताजा जनादेश ल्याउन निर्वाचनमा जान लागेको हुँ ।